Amakhompyutha, Izinhlobo zamafayela
Lokhu kwaziswa uzobe kuchazwe ukunwetshwa P7S. Indlela yokuvula lolu hlobo lwamafayela, kanye kuzinjongo ahloselwe, intando imininingwane ngezansi. Igama lakho lokuqala lokhu PKCS-7 ifayela Isignesha impahla.
Asiqale ukhuluma ngani P7S format. I ovulekile, uchaze ngezansi, kodwa manje zama ukuba siqonde injongo yalesi sinqumo. Material lokhu format iyona umyalezo we-imeyili equkethe isignisha yezinombolo. Le fomethi isetshenziselwa ukudluliswa ephephile e-mail. Abakwazi kuphela ukubuka umamukeli. Le ndlela yokudlulisela umthumeli etshengisa futhi uqinisekisa ukuthi incwadi ethile wayengekho kwashintsha ngo inqubo athunyelwa nganoma iyiphi indlela. Uma uhlelo lakho le-imeyili ayisekeli nesignesha digital, ifayela P7S ngokuvamile kubonakala njengoba isinamathiselo umyalezo. E-mail amaklayenti ezisebenza lesi sakhiwo, wasebenzisa PKCS ejwayelekile. Ngakho is wadala isignesha imilayeto ye-imeyili.
Ngakho, thina P7S ifayela. Ulivula, ukutshela iklayenti imeyili. Mozilla Thunderbird eziphindiwe eziningi isiphequluli yenkampani esibonakalayo. Isebenza ukuthi isinqumo osebenzisa isimiso esifana. Ukuze ukunambitheka yakho, ungakhetha efanelekayo indaba ephathwayo. Kungenzeka ukulungisa 5 amazinga ifonti zangemuva izincwadi. Isicelo kuhlanganisiwe umtapo izithonjana. Ijubane lale iklayenti imeyli iseduze ukuthi brand kusiphequluli. Umkhawulo isikhathi sokulinda ukuze uthole umlayezo noma umlayezo othunyelwe kuba imizuzu 10. Emva kwalesi sikhathi, inquma ukuthi ukuxhumeka sinqamukile, okuholela izitobhi ukuthumela. Lenkinga ibuye kalula silungiswa ekushintsheni izilungiselelo software.
ezinye izinhlelo zokusebenza
Kukhona namanye amathuluzi ukusekela format P7S. Uvula idokhumenti ezinjalo, uhlelo kuzokusiza uqonde ibhokisi lokuthumela. Futhi kulokhu, kungasiza Microsoft Outlook. Lena umphathi ulwazi, okuyinto sidalwe "Microsoft". Uhlelo ihlanganisa izici iklayenti imeyili phansi nokucindezelwa ngezindlela zokuthi ukusebenza ndawonye. Outlook siyingxenye ye iphakethe-Microsoft Office office suite. Xazulula le nkinga kanjani ukuvula ifayela P7S, futhi unga ngokusebenzisa isicelo "CryptoARM". Kuyinto software iphakethe jikelele. It ikuvumela ukuthi usebenzise izindlela wokubhala ngezimpawu ukuze ibhizinisi futhi ezazibhalelwe abantu nje abavamile. Ngalesi isixazululo sikwazi ukuqinisekisa ukuvikelwa kokubili ukwaziswa kwenkampani kanye siqu.
Uhlelo lokusebenza lithole limnandi isikhombimsebenzisi sokuqhafaza. Le isixazululo inikeza okunokwethenjelwa ukubethela nedatha ukuqaqwa. Futhi ngosizo leli thuluzi ungakha futhi uqinisekise nesignesha digital. ukusetshenziswa Iyatholakala okhiye yomphakathi, futhi kusekelwa emsebenzini kanye nezitifiketi Crypt. With lolu hlelo ungakha noma iyiphi inombolo ye yogesi kanye ukuqinisekisa ubuqiniso balo. Usekela ukuqaqwa amafayela. Ukubulawa ukuthengiselana esisodwa.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho P7S. Wena uvule ifayela ne isandiso futhi ngayiphi ukusetshenziswa lesi sakhiwo, wachaza ngokuningiliziwe ngenhla.
Isikhawu Isigamu: singakanani futhi nokuthi ibalwe kanjani
Izithupha db ifayela - kuyini? Indlela naso ngokuphumelelayo?
Ukuze ufunde indlela ukuvula ifayela Dmg
Indlela ushintshe ifomethi isiqophi kukhompyutha yakho - imininingwane
Kangakanani nokubhaliswa Zao
Isithombe sikaVasnetsov "I-Bogatyrs": i-Rus yonke emgqeni owodwa